Top 10 Goobaha Casriga ee Ruushka - Koodhadhka Gunnada ee Khadka Tooska ah
Top 10 Ruush Casino Sites
(786 votes, celcelis ahaan, 4.00 out of 5)
Loading ... Khamaarka ayaa mid ka mid ah dhibaatooyinka siyaasad weyn ee dowladda Ruush galay tan iyo bilowgii qarnigii 21st sababtoo ah tirada si degdeg ah sii kordhaya ee mishiinada iyo guryaha khamaarka. Kasiinooyinka bilaabay faafo dalka oo dhan, kaas oo sababay inuu walaac weyn ee maamulka deegaanka, kuwaasi oo ay ka walwalsan tahay dadka ka yar.
Flag of RussiaCurrently, qamaarka in Russia waa sharci in dhowr maadooyinka gobolka. A dhowr sano ka hor - in 2009 - waxaa la naadiyey sida sharci darada ah ee inta kale ee dhulka ee dalka oo qayb ka ah siyaasadda anti-khamaarka adag Russia ee.
maamulka ee dalka ayaa run ahaantii marnaba ma taageerin hawlaha khamaar web-ku salaysan, taas oo noqday sabab sababta ciyaartoyda helaan websites turub la xiriira la xakameeyey oo macno ahaan aan sabab muuqata.
List of Sites Casino Online Top 10 New Ruush
History of Regulation Khamaarka ee Russia
Dhamaan noocyada qamaarka ayaa si rasmi ah ka mamnuuc 1928 iyo in ka badan markii ugu markii Russia ayaa la hoos geliyo Rule Soviet. Tani waxay socotay ilaa ku dhawaad ​​dhamaadkii 1980s ah, marka xeerarka qaar ka mid ah maray iyada oo loo marayo isbedel. In 1988, dalka sameeyey makiinadaha lacagta sharciga ah ee meelaha qaarkood oo keliya. Mamnuucidda qamaarka ayaa waxaa si buuxda u qaado 1989.
In muddada u dhaxaysa 1989 iyo 2002 waxa uu ahaa waqti ka mid ah kor u kac wayn ee tirada casino hawlgala gayiga Russia, iyadoo in ka badan guryaha khamaarka 50 lagu ordo ee Moscow oo keliya. Noocan ah madadaalada iyo aad u badan oo caan noqday ka mid ah muwaadiniinta degaanka, laakiin xeerka dalka ee wuxuu ahaa mid liita, taas oo ka dhigtay dowladda dalka ka qaadaa tallaabooyin degdeg ah si loo xakameeyo waxqabadka.
Tani waxay soconaysaa ilaa 2006, marka sharci in laga mamnuucay nooc kasta oo khamaar online ee dalka oo uu soo ansixiyey Dowladda Ruush. Ilaa iyo markaas, macaamiisha maxaliga ah ayaa la siiyey in ay helaan website-yada khamaarka ugu.
In 2009, khamaarka waxaa la sharciyeeyay in guud ahaan afarta qaybood ee dalka: Kaliningrad Oblas, Altai Krai, Primorsky Krai iyo Krasnador Krai. status quo ayaa socday ilaa saddex sano ka dib. In 2012, mamnuucidda khamaarka online in dalka la keenay hal talaabo mahad dheeraad ah si go'aan Maxkamadda Sare ee Russia, kaas oo sheegay in website-bixiyayaasha khamaarka online 'waa in la xakameeyo dalka.
Roskomnadzor The - liiska sheegaya dhan websites sida sharci-darrada ah ku wacdiyey by Dowladda Ruush - waxaa loo sameeyey dadweynaha danbe ee 2012. Liiska waxa ku jira macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan tiro ka mid ah domains qabtay by shaqeeya khamaarka caalamiga ah. Tani waxay keentay in qaar ka mid ah magacyada ugu weyn ee warshadaha in la xidhay ay helaan internetka macaamiisha Ruush, laakiin shirkadaha kale ee weli waxay bixiyaan adeegyo ay dalka.
Waxaa jiray guud ahaan la mamnuuco ka badan khamaarka dib ee USSR, ka dib markii taas oo xayiraad khamaarka ahaayeen yara tabarta yar, gaar ahaan meelaha la si joogta ah u soo booqday by dalxiisayaasha. tiro sii kordhaysa oo casinos iyo guryaha sharadka la sameeyey la heli karo ilaa ganaax khamaarka la qaaday Dowladda ee August 1989 iyo goobta ugu horeysay ciyaaraha ee Moscow la furay.
Si kastaba ha ahaatee, xeerka saboolka ah, la socodka iyo gacan ku haynta hawlaha khamaar dhulka ee dalka noqday sababta qamaarka ayaa ku soo bilowday keeni karaa dhibaatooyin badan dawladda. Tani waxay keentay in ay isbedel weyn oo ka mid ah sharciyada khamaarka Ruush ee 2009.
hawlaha Khamaarka in casinos jirka ah ayaa lagu mamnuucay dalka nus-sano ah hadda.
Sida kor ku xusan, qamaarka ee Russia waxaa si rasmi ah sharciyeeyay in dhowr gobol oo ku yaalla qeybo ka fog ee dalka. gobollada kala yihiin: Kaliningrad Oblast, Azov-City (qayb ka mid ah Rostov Oblast waxaa laga saaray liiska), Altai Krai iyo Primorsky Krai.
Primorsky Krai waxaa loo tixgelinayaa si fiican u doortay si ay u faa'iidaystaan ​​suuqa Asian ku nasanayay. gobolka waxa uu ku yaalaa meel u dhow soohdinta dalka Shiinaha, kaas oo ah in ay bixiyaan shirkadaha maxalliga ah fursad ay ku soo jiidan rollers sare Asian gobolka.
Waxaa jira sidoo kale qorshaha casino a super sugnaa dhow Vladivostok in waxaa sidoo kale dooneysa at jiitay ciyaartoyda dheeraad ah si ay aagga.
In December 2014, waxaa caddaatay in Madaxweynaha Vladimir Putin siiyey Iftiin cagaar ah si ay kordhaan tirade ka mid ah maaddooyinka gobolka, taas oo keentay in ay ka mid yihiin galay Crimea iyo Sochi liiska.
khamaar Online, dhanka kale, waxaa si buuxda u mamnuucay dalka. Isla sidaas u dhaqmaan in ay ku noolaadaan hawlaha khamaar ee inta kale ee territory Russia ee. siyaasadda dalka ee ma muujiyaan hab kasta oo waxaa laga yaabaa in isbeddel lagu sameeyo xeerarka, kuwaas oo mar kasta ugu dhakhsaha badan mustaqbalka dhow.
Currently, qamaarka ee Russia ayaa maaddo gariir, sida ay u kaca qaban, caasiyoobay oo liidata socdo keentay dhibaatooyin khamaar weyn id ah dadka deegaanka iyo gaar ahaan dadka da'da yar ka mid ah.
In dalka, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira bakhtiyaa federaal ah, taas oo ah sharci. bakhtiyaa waxay bixisaa ciyaartoyda fursad ay ku sharad via laba lotteries dawladdu maamusho - Gosloto iyo Sportloto. Qaar ka mid ah isbedel ah ayaa sidoo kale ka dhigay suuqa sharadka ciyaaraha, fulinta ee liisanka gaar ah ayaa loo baahan yahay ee ka shaqeeya.
Regulation Khamaarka iyo Maamulka Russia
Sharci Khamaarka ee RussiaCurrently, Dowladda Ruush qabata sharciyeynta gobolka ugu weyn ee dhammaan adeegyada iyo hawlaha la xiriira khamaarka. Waxaa jira hay'adda fulinta federaal ah in uu xaq u leeyahay qabtaan hawlo gaar ah si ay ula socdaan xeerka caadiga ah iyo sharciga marka ay timaado ururka khamaarka.
Intaa waxaa dheer, madaxda kale ee fulinta federaalka ay leeyihiin kartida qaar ka mid ah ee la xidhiidha kantaroolka iyo habka hubinta ee hawlaha sida. Dhowr laamaha Dawladda oo ka mid ah hay'adaha dastuurka ee dalka ayaa sidoo kale waxay awood u leeyihiin in ay qabtaan hawlaha maamulka zone ciyaaraha iyo qaanuunka.
Sida uu sheegayo sharciga Ruush, hawlaha khamaar la diyaarin laga yaabaa in hay'adaha sharciga ah, kuwaas oo ka diiwaan gashan yihiin waraaqo ay dhigayaan sharciyada iyo nidaamyada fulin by Ruushka. No hay'adaha sharciga ah, kuwaas oo la xidhiidha in dalkuba, hay'adaha dastuurka dalka ama maamulka dawlada hoose waxaa la siiyaa fursad ay ku diyaarin iyo hay adeegyada khamaarka iyo hawlgallada.
Waxaa jira afar qaybood ciyaaraha sameeyay waraaqo la sharciyada Ruushka. Ka dib markii Putin Madaxweynaha heshiiyeen sii kordhaya tirada dadka goobaha ciyaaraha gaar ah, sida la filayaa in ay la qotomiyey gudahood, Altay ku Kaliningrad iyo Primorie, iyo sidoo kale ku taal soohdinta u dhaxaysa gobolka Krasnodar iyo gobolka Rostov.
Dowladda waa inay u leeyihiin amar ah in la dhiso iyo liquidate zone ciyaaraha ah, iyo sidoo kale ad adkaynaya dejinta magacyada goobaha ', xuduudaha iyo sifooyinka kale ee hoos shuruudaha heshiis la meydadka dowladda ee hay'adaha dastuurka.
Maamulka hadda in xaq u leh aqoon guud ka badan foomamka mid ka mid ah hawlaha khamaar gayiga Russia yihiin Dowladda iyo Wasaaradda Maaliyadda ee Ruushka.
Adeega Canshuurta Federaalka ah ee dalka ayaa sidoo kale la siiyey mas'uuliyadaha qaar ka mid ah si ay u diiwaan shaqeeya bookmaking, totalizators iyo dhibcood sharadka. Waxa kale oo ka mas'uul ah hubinta xaaladda farsamo ee qalabka khamaarka. mas'uuliyadaha gaarka ah qaar ka mid ah ayaa sidoo kale la siiyey in ay masuuliyiinta qaar ka mid ah, marka ay timaado in la xakameeyo, la socodka iyo sharciyeynta in aqoonta guud dambe ee.
fal ugu weyn ee sharci-dejinta in qeexayaa waxyaabaha aasaasiga ah ee khamaarka ee Russia iyo waxay bixisaa xal sharciyeed adeegyada khamaarka iyo hawlaha dalka waa Law Federaalka ah ee December 29th, 2006 No. 244-FZ.
Sida kor ku xusan, Law Khamaarka uu ugu baaqayaa dhammaan noocyada kala duwan ee khamaarka sharci-darrada ah, marka laga reebo noocyada la nidaamiyo hoos shuruudaha iyo xaaladaha gaarka ah ee goobaha khamaarka si gaar ah ka dhigay.
Waxaa sidoo kale jira dhowr sharci dejin hoosaadyo bixiya qeexitaanno iyo sharraxaad kafiican shuruudaha iyo nidaamyada lagu hirgeliyey Sharciga Khamaarka. Si kastaba ha noqotee, sharciga la xiriira xakamaynta bakhtiyaa-nasiibka waa mid gaar ah. Dukaammada waxaa nidaamiya Sharciga Federaalka "On Lottery" ee Noofambar 11th, 2003 nr. 138-FZ.
Khamaarka Online ee Russia
Khamaarka Online in RussiaConsidering gobolka guud ee warshadaha khamaarka ee Russia, khamaarka online ayaa sidoo kale la xidhiidha walaaca sii kordhaya. Sidaas daraaddeed, ma aha la yaab leh in khamaarka online in Russia waa sida weyn loola dhaqmo sida hawlaha casinos dhulka ku saleysan. Adeegyada khamaarka web-ku salaysan ayaa hadda si firfircoon uga mamnuucay.
In ka badan toban sano ka hor - in 2006 - kulan ciyaaro fursad waxaa si rasmi ah mamnuuc shuruucda dalka. Turub, si kastaba ha ahaatee, weli meel cirro sababta oo ah wada hadal ku inkale in ay tahay xirfad ama ciyaarta fursad.
ciyaartoyda degaanka ku salaysan awoodin in ay helaan website-bixiyayaasha dibadda ', iyadoo aan loo eegayn xaqiiqada ah in ISPs ayaa laga codsaday in ay xannibi websites la xidhiidha khamaarka.
0.1 List of Sites Casino Online Top 10 New Ruush
2.1 History of Regulation Khamaarka ee Russia
2.3 Regulation Khamaarka iyo Maamulka Russia
2.4 Khamaarka Online ee Russia